codsi diyaarad sano 3 4 bilood ka hor #358
WAAN HALKAAN HADDII ayaa jira oo aan ku gabban karaa codsiyada OBNOXIOUS marka aad xamuul qorshe duullimaad oo ku weydiinaya "Ma dooneysaa Duullimaadka Flight Simulator inuu diyaaraddaada u wareejiyo gegida dayuuradaha ee ku qoran qorshaha duullimaadka."
DHAMMAAN duulimaadyadeyda ayaa la raad raacaa maadaama dhammaantood ay ku jiraan VA-ga anigaa iska leh. Hagaag, waa inaan ka wareego VFR una wareego IFR, oo gacantayda ayaa si lama filaan ah ugu degtay batoonka laga galo midigta fog, oo igu kacday aniga iyo maalinta oo dhan qiimaha duullimaadka ..... taas oo macnaheedu yahay inaan si dhab ah u taabtay dameerkeyga hadda HADDII dooneysaa xitaa inaad haysato fursad ah inaad hogaaminta ku sii jirtid masaafo dheer oo loogu duullay bisha….
codsi diyaarad sano 3 4 bilood ka hor #416
Waxaan dareemayaa xanuunkaaga, waxbadan oo shaqo ah oo ay sababtay farta sakhradda,, lol
Ijaarka dhammaan calaacalaha kale ee 9 waxay qabanayeen shaqadooda duulista,,? ,, eh? ,,, lol
Taasi waa wax wanaagsan oo ku saabsan 9 ka baxsan 10 ...
Ka dhig mid hagaagsan,, Rakaabka AA ayaa adiga kugu tiirsanaya adiga!
codsi diyaarad sano 3 4 bilood ka hor #421
lol oh inta badan waan xamuul xamuul hada maxaa yeelay taasi waa waxa inaga dhigeysa $
ku dhowaad 560K NET duulimaad ah oo ku yaal 747-LCF lol
Naar, duullimaadyo dheeri ah oo 65 ah, oo waxaan ku filnaan doonaa inaan bixiyo mid ka mid ah 2 777-200LRs sidaas… malaha qiyaastii waqtigan bisha soo socota….
codsi diyaarad sano 3 4 bilood ka hor #426
Cargo waa weyn ...
Laakiin waxaad seegtay marwada Stuard dareenka macaan & kareemka qaxwaha ee weyn ... Qiimahoodu ku yahay buuggayga!
codsi diyaarad sano 3 4 bilood ka hor #428
LOL xitaa dheg uma dhigin ATC illaa aan taksi qabo, qaato ama geysto jahawareer MARKA waqtiga ugu badan FSX kaliya gadaal ayuu usocdaa inta aan qabanayo waxyaabo kale.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.180